airbus_a320_family_mega_pack_v3_05 2 bilood 1 toddobaad ka hor #1783
Fadlan qof baa ii sheegi karaya sababta makiinadaha diyaaradda ku jira ee xirmadaan ay gooyaan marka labaad ee giraangiraha ay dhulka ka baxaan waa wax aad looga xumaado.
airbus_a320_family_mega_pack_v3_05 2 bilood 1 toddobaad ka hor #1784
Cayayaan caan ah oo laxiriira "qabow iyo mugdi" oo ay diyaaraduhu ku duuleen. Tag bogga deg degga ah ee diyaaradda, oo si adag u raac tilmaamaha oo dhan.
user soo socda (s) ayaa sheegay in Waxaad ku mahadsan tahay: PAUL1984
airbus_a320_family_mega_pack_v3_05 2 bilood 1 toddobaad ka hor #1786
Tilmaamaha ku yaal bogga rakibida gabi ahaanba waxay duubeen aniga fsx
airbus_a320_family_mega_pack_v3_05 2 bilood 1 toddobaad ka hor #1787
Ka dib tag oo tirtir lambarkaaga fsx.cfg file. Sim wuxuu abuuri doonaa mid cusub oo iskuday markale. Waxaad u baahan doontaa inaad waxyaabo qaar mar labaad dhigto, taas oo ah waxyar oo faff ah laakiin, waxay meesha ka saari doontaa dhammaan meelaha khaldan iyo dhibaatooyinka badankood.